Waxaan tijaabinay Htc Desire HD waana kuu sheegnay wixii aan ka helnay | Androidsis
antocara | | HTC, Reviews
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, maalmo kooban waxaan haysanay mid ka mid ah boosteejooyinka kor u qaadayay rajada ugu badan tan iyo markii lagu dhawaaqay, Htc Rabitaan HD. Horaan kaaga tagnay isaga unboxing Maantana waa inaan ka faalloonno dareenkeenna ku saabsan taleefankan casriga ah, oo ah kan ugu sarreeya ee boosteejooyinka ay Htc hadda ku leedahay suuqa.
Inaad awooddo inaad isku daydo way ku mahadsan tahay vipmobile, Dukaanka taleefanka ee internetka oo aad ka heli karto labadaba Htc Desire HD iyo moodellada kale ee Android qaab qaab bilaash ah qiimo aad u fara badan.
oo dhan qeexitaannada farsamada ee terminalka aad ku haysato halkan waana horey u soo sheegnay marar badan sidaa darteed waxaan ku sii adkaysanayaa sharraxaadda wixii aan ka helay kan ugu cajaa'ibka badan Htc Rabitaan HD Taasna waxaan u maleynayaa inay kaa caawin karto inaad go'aan ka gaarto terminalkan iyo in kale.
El Htc Rabitaan HD taagan yahay kor wax walba hal, cabirka shaashadda. Cabirkeedu yahay 4,3 inji cabirkiisuna waa 480 × 800 pixels waa wax markasta oo aad gacanta ku hayso ka dib wax walba ay yaraadaan. Tani waa wax ay horaanba qaarkood u noqon karaan sabab loo tuuro moobilkan markii la raadinayo wax ka yar oo caqli badan.
Cabbirkani wuxuu kaloo ka dhigayaa adeegsiga teerminaalka hal gacan, in kasta oo ay suurtagal tahay, xoogaa dhib ku tahay dhinacyada qaarkood. Waxaan ku iftiiminayaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee aan hoosta kaaga tago.
Shaashadani waa mid balaaran oo xalinteeda la aqbali karo laakiin dabcan waxay muujineysaa inaan wajaheyno shaashadda SLCD umana muuqato Super Amoled gabi ahaanba. Midabada xoogaa wey aamusantahay oo wax dhalaalaya ma leh. Way cadahay in ku darista shaashadda Super Amoled marka lagu daro kordhinta kharashkeeda ay ka dhigi lahayd taleefankan casriga ah mid aan laga gudbi karin.
Muuqaal kale oo soo jiita dareenka ugu badan, oo markan Htc uu ku dhuftay ciddiyaha madaxa, waa jidhkiisa. Waxaa laga sameeyaa hal bir ah oo aad u badan qaabkii caanka ahaa ee Htc Legend laakiin iyada oo aan ahayn codka aluminium ee uu ebutekani inoo keenayo. Waa dhawaaqa naxaas leh, laga yaabee inay siiso daran iyo madaxnimo iyo sidoo kale adkaansho ay maanta kumbuyuutarro yar leeyihiin.
Marka laga hadlayo howlaha terminal-ka, kaliya waxaad dhahdaa waxaan wajaheynaa kaladuwanaanta ugu sareysa ee Htc marka waa wax lala yaabo hadii ay laheyd nooc ka mid ah dhibaatooyinka ama guuldarada arintaan la xiriirta. Processor-kiisa 1Ghz oo ay weheliso 768 Mb oo RAM ah wuxuu ka dhigayaa nidaamka oo dhan inuu duulo oo ay ku jiraan furitaanka codsiyada, xiritaanka iyo u wareejinta, guud ahaan wax waliba si dhakhso leh ayey u socdaan.
Iyada oo leh kamaraddeeda 8 mpx oo leh labalaab, laba jibaar toos ah iyo awoodda wax lagu duubo ee 720p, waxaan u maleynayaa in aan leenahay muuqaalka guud ee warbaahinta badan ee xallinta. Maaha dhakhtarka indhaha Carl Zeiss laakiin aragtidayda waxay qabataa shaqadeeda si layaableh. Intaas waxaa sii dheer, softiweerka maareynta kaameeradu wuxuu ku darayaa shaqooyin badan sida aad ku arki doontid fiidiyaha sameeya "ciyaarta" ay kamaraddu na siin karto ayaa ka weyn.
Qodob kale oo hooseeya tan Htc Rabitaan HD waa baytariga. Horay u soo bandhigideedii, awoodeedii 1230mAh waxay umuuqatay xoogaa yar hadana nasiib daro kumaanaan socon wadada saxda ah. Iibsashada bateriga labaad waxaan dhihi lahaa waxay ku dhowdahay inay muhiim u tahay isticmaalka dhexdhexaad-sare ee terminaalka.
Iskuxirkiisu waa nooca labaad ee Ht Sense, oo ah hirgelin aan sifiican uga naqaanay terminaallada kale iyo in laga reebo dhowr wijaajleyaal ah iyo qaar ka mid ah fursadaha habeynta mowduucyada cusub wax cusub ma keenayaan
Waxaa mudan in la muujiyo softiweerka cusub ee GPS navigation ee ay Htc ku dartay, oo leh xulashooyin aad u cad oo toos ah iyo marin-u-helyo si weyn u fududeynaya isticmaalkeeda. Dabcan sidoo kale astaamaha cusub ee boggaaga htcsense.com isku xirka xiriiriyayaashan oo aan ka heli karno ilo loogu talagalay terminaalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah xulashooyinka fog ee raadinta taleefanka haddii ay dhacdo in la waayo. Laakiin tan, halkii, waxaan u tixgelin lahaa inay yihiin kuwo dhammaystiraya Desire Hd halkii aan ka ahaan lahaa mid shaqeynaya terminaalka laftiisa, kuwaas oo ah dhibco ay ku qanacsan yihiin laakiin taas oo runtii aan ahayn waxa ugu muhiimsan marka go'aan laga gaarayo Taleefannada casriga ah iyo in kale.
Soo koobid waxaan dhihi karnaa kan Htc Rabitaan waa terminal weyn, xarrago leh, dhaqso badan, ku fiican daalacashada webka ama xitaa akhrinta buugga qariibka ah (in kasta oo shaqsiyan kuma talin lahaa in lagu sameeyo midkan ama mid kale oo le'eg ama ka yar), waxaan sidoo kale ka daawan karnaa waxyaabo badan oo warbaahin ah si layaableh boggan Marka laga reebo midabada waxyar ka aamusnaaday oo aan xitaa ku arki karno filim ama silsilad iyadoo aan indhahayaga aad looga badin. Haddii aan ku darno tan aad jeceshahay interface-ka Htc markaa hubaal waa taleefankaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » Waxaan tijaabinay Htc Desire HD waana kuu sheegi doonaa waxa aan u maleyno
Batariga oo hawl caadi ah wata, intee in le'eg ayuu soconayaa? Marka loo barbardhigo iphone4?
Ku jawaab jose maría
Telefoonkani waa mid laga cabsado, waxaan ku xididaystay android gadoodka hd waana duulayaa - baytarigu wuxuu sii soconayaa boqolkiiba 40.
Waan kugula talinayaa.
Ku jawaab Fart
Salaan baa jira! Sidee tahay! Kaliya waxaan isku soo bandhigayaa mowduucan waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aad igula talinayso inaan soo dejiyo ama aan ku xidido android Revolution hd ...
Boostadaydu waa miguelmuzi@hotmail.com
Ku jawaab Miguelmuzi
Waan haystaa oo batteriga mararka qaarkood ma soconayo 12 saacadood. Marwalba waxaan qaadaa xeedho. Waa qaladka kaliya ee aan arko. Haddii kale waa terminal awood badan.
Waxaan leeyahay mid waxaan haystaa iPhone 4. Sida batteriga, ficil ahaan waa isku mid. Waxaan u isticmaalaa maalinta oo dhan wax kasta: GPS, sawirro, emayl, shabakado, iwm oo waxaan ku qaadaa habeen walba anigoo wata batariga saddexaad. Saaxiibkeey kaliya wuxuu adeegsadaa iphone 4-ta waqtiga qadada si uu ula sheekeysto hadii hal habeen aysan lacag ka qaadin, maalinta xigta qadada kahor taleefan ma heyso. Waxaan qirayaa in nolosha batteriga ee HTC rabitaanka HD ay si aad ah kor ugu kacayso waqtiga.
Ku jawaab lviz
waa si fudud expectacula kama aanan fileynin wax ka yar htc sida ay ku yiraahdaan baraha qaarkood waa sida htc evo 4g. laakiin haddii 4G .. hehe terminalkani uu yahay mid timo leh.
Ku jawaab iskondor
Andy Garcia dijo
Dhowr asxaab ayaa kula taliyay android-kan inuu yahay midka ugu wanaagsan xilligan laakiin markaan arko qorshayaasha qiimaha ee hawlwadeennada waxaan dareemayaa inay doonayaan inay i caayaan, si aan u arko haddii boosteejooyin cusubi u soo baxayaan oo ay qiimahooda hoos ugu dhacaan. Waxaan kusii wadaayaa spica-ga iyo yoigo.
Ku jawaab Andy Garcia
Andy wuxuu eegaa «founjaus» taas oo leh yoigo waxay umuuqataa inay aad ufiicantahay. Waan helayaa
Waxaan dalbaday HTC Desire HD runtuna waxay tahay shaki ayaan ka qabaa shaashadeeda… Dadka qaar waxay dhahaan aad ayuu ufiicanyahay qaarna waa wax aad uxun… Waxaan aqriyay in shaashadiisu tahay SuperLCD, Amoled, TFT. cadee waxa ay leedahay shaashadda mobiladan? Oo sidee tahay Mahadsanid
Ku jawaab Maverick
Shaashadu waa SLCD waqtiga jawaabtuna waa hagaagsan tahay, waxa kaliya ayaa ah in midabada iyo dhalaalka shaashadda aysan aad u wanaagsaneyn, waxay umuuqdaan kuwa caajis ah, oo aan lahayn dhalaal. Dhamaan wanaag
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada antocara ...
Shaashadu waa superLCD (SLCD) shaashaduna hadii ay leedahay dhalaal iyo midab badan, kaliya waxay ku saabsan tahay go'aaminta inta midab ee aad rabto iyo sida ay u iftiin badan tahay waxaadna ku ridi kartaa goobaha ajustes
Ku jawaab XeXu
Waa maxay saaxiib wadaage qabow ha .ha ha ha
Ku jawaab jaal
Fadlan, laakiin sidee u dalban kartaa fiidiyow dib u eegis leh lisp aad u badan iyo "yu tu" (youtube) iyo kuwo kale.
Saaxiib, ha sameynin fiidiyoow leh qufac saameyn daran ku yeeshay shaqadaada!
Dhanka mobilka… .waa martida! Shaashaddu aniga igama khusayso ... shaqadoodu waa raaxo. Maxay tahay faa iidada shaashadda leh amoled sida ama Samsung taleefankuna waa dilaa?!
Horeba, batteriga waa ´´putada´´ laakiin sida mobilada kale waxaa jira degello ay ku iibiyaan baytariyada tas-hiilaad aan asal ahayn laakiin leh awood dheeri ah, ma aqaano sida ay amaan u noqoneyso laakiin hey waa ikhtiyaar, midabada shaashadda, ma doorbido inay leedahay 4.3 `` intaas ka yar oo leh shaashad amoled ah, si daacad ah hadaad rabto inaad filim aragto waxaad ku arkaysaa laptop-ka ama telefishanka, iyo caajisnimo ku deg deg inaad aragto shaashad iyadoo midabada lagala baxayo .. Waxaan filayaa inay kufilan tahay.
Dhawaan waxaan yeelan doonaa terminalkan, waxaan u arkaa inay ka fiican tahay iPhone 4 ilaa sanka shaashadda.
Ku jawaab htcdesire
Jawaabtaada meelna looma qaadi karo
MA GARAN YAHAY WAXA AAD SAMAYNO GUYS, WAAN ISKU AQBALSANAHAY, MA GARAN KARO HADDII AAN QAADO DHIBAATAN MOBILE AMA NOKIA N8, WAY I SHEEGEEN IN N8KU UU LEEYAHAY MULTIMEDIA, IYO HTC DESIRE HD WAA UU MAWDUUCA INTERNET-KA INTA BADAN, DHIBAATADA UGU WEYN EE HTC AYAA AH IN BATTARKA LAGU DHAQAADO MAALIN WAX KALE OO HADDII AAD ISTICMAAL BADAN TAHAY, MA ARKAYO INTA BADAN SHAQO WANAAGSAN OO KELIYA IYO MID KALE OO AAN GARANAYN WAXA LAGU RABO XAQIIQADA, UU KA BAXO FAAHADAHA HALKAN OK, SALAANTA TODSS IYO MERRY KRISMA !!!
Ku jawaab badder
Ha ka baqin batteriga, waxay socotaa maalinta oo dhan adoo adeegsanaya goobta shaqada (boostada, geolocation joogto ah, whattsapp, hadal, gmail, sarrifka iyo boostada riix). Shaashadu waa in la dhadhamiyo, waan la qabsaday oo runta ayaa ah in ay ii geysato waxyeello ka yar tii Galaxy S ee maalinta hore iyo sariirta oo aan iftiin lahayn! 😉
Waxaan hayaa taleefankan 3 maalmood oo batteriga wuxuu ku egyahay 7 saacadood asagoon isticmaalin wax badan. Ma caadibaa qarashka ugu horeeya mise dhibaato ayaa dhici doonta?
Waad salaaman tihiin asxaabta, marka hore waxaan idiin sheegayaa inaan leeyahay HTC DESIRE HD tan iyo bishii Diseembar 24 oo ay si fiican u shaqeyso.
Arrinta batteriga ayaa soo hagaagtay marka loo eego maalmihii ugu horreeyay (7-8 saacadood), xilligan ay socotey illaa 2 maalmood, markaa haddii, adeegsiga dhexdhexaadka ah ee taleefanka, aniga daqiiqad kasta kuma xirna.
Aniga ahaan waxbadan igaga fiican iphone 4.
Waxaan haystaa dhowaan waana raaxo.
Batariga waa run oo ma sii dheereysto.
Laakiin taasi waxay hagaajineysaa days maalmaha ugu horreeya, adoo raba inaad aragto wax kasta oo aad haysato, ma hakanaysid waxoogaa daqiiqado ah, maalmaha aad degto oo aad u isticmaasho markaad u baahato.
Fadlan qof ha siiyo ku dhawaaqeyaa koob biyo ah !!
Waxaan hayaa tan iyo Janaayo 4, 2011 wax walbana way fiicnaayeen illaa maalmo yar ka hor. Waxaan ogaaday in GPS-ku waqti dheer qaadanayo (markay socoto). Ma jiraa qof og waxa dhacaya? Maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Jandu
Waxaan haystay rabitaanka htc rabitaankiisa muddo dhowr bilood ah, halka kaliya ee aan ka helaana ay tahay muddada gaaban ee batterigeeda ku jirta. Waa inaan qaadaa maalin kasta. In kasta oo aan horeyba u ogaa taas kahor, anigoo og nooca shaashadda LCD
Ku jawaab joanitus
Isbarbardhiga iPhone 4 iyo shuclada blackberry 9800 dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa iphone 4 waxayna ii soo bandhigeen hamiga htc HD ama tooshka madow ee 9800. Maxaad igula talin kartaan?
Ku jawaab isbarbardhiga iPhone 4 iyo shuclada blackberry 9800
nin in codka sigaarka uu baabi'iyo fiidiyowga taxaddar tronko oo qabo dhowr ukumo cayriin
Dhawaan ayaynu haysanay oo batteriga ayaa saxaro ah, waxaan ka dalbaday Shiinaha 1550mAh si aan u aragno sida ay ugu kacayso 5 yuro maraakiibta. Haddii kale waa mobiil weyn oo leh shaashadaas oo sawirrada lagu sameeyay midab dhab ah, waxaan leenahay 2 Samsung Galaxy S oo iyagu midabbo badan ayay leeyihiin, laakiin htc waan jeclahay qeexitaanka. Fiidiyowyadu sidoo kale way fiican yihiin. Maaddaama aan haysanno saddexda lagu sharraxay iyo Iphone4 waxaan ka tagnay sawirrada iyo kaamirooyinka fiidiyaha, wax walba waxaan ku sameynaa taleefannada gacanta.
Ku jawaab demosteles
moobaylkani waa $ weyn yahay !!!
Ku jawaab Mari_134
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo batteriga, maadaama meelo badan la yiraahdo wax yar ayuu sii socdaa, laakiin 7 saacadood waa AAD AAD, sida ay halkan ku yiraahdaan. Taasi waa, ka arday ahaan waxaan uga tagayaa guriga 8-da waxaanan u adeegsan lahaa si aan u dhagaysto muusikada, internetka, iyo codsiyada sida wapp, twitter iyo waxyaalahaas…. Miyaad u malayn inay igu sii socon doonto?
Ku jawaab SK
Waa salaaman tahay, waxaan u jeedaa si aan u iibsado laakiin aniga ayey igu dhacdaa aniga oo wali guriga ka taga 8-da subaxnimo mana soo laabto ilaa 7-da galabnimo waxaanan u baahanahay batteriga inuu saacado badan socdo
Ku jawaab Alexvopa
Waad salaaman tihiin lamaanayaal.
Waxaan hayaa HTC Desire HD waxaanan u geeyay 5 jeer adeegga farsamada in taleefanka la hagaajiyo. Waxa kaliya ee ay igu sameeyeen waa guddiga 'SWAP' iyo xitaa shaqooyinkaas si sax ah. Waxa dhaca markasta waa inuu shilmo, markasta dib u bilaabo, mararka qaar shaashadda ma shaqeyso oo wey maran tahay,…. 5 jeer ka dib markay u geeyaan adeeg farsamo xalna u heli waayaan, markan waxay saxeexeen saxanka, kamaraduhu si sax ah ugama jeedaan, marka taleefanka gariiro waxay umuuqataa inay jabayso,
Laga soo bilaabo kulankaan waxaan rabaa in qof kastaa ogaado xaqiiqda dayactirka wanaagsan ee ay sameeyeen adeegga farsamada ee Vodafone ay leedahay.
Waxaan sidoo kale la hadlay adeegga macaamiisha iyagana iima helaan xalal, waxa intaas ka sii badan, waxa ay i siiyaan oo dhan waa dhibaatooyin, waxay ii sheegaan inaan u soo diro fakis ay ku jiraan dhammaan dayactirka uu taleefankaygu lahaa, oo ay tahay inay yeeshaan tan iyo dayactirrada oo dhan waxaa lagu sameeyay dukaan taasna waxaa la iigu yeeri karaa qof inuu iisoo bandhigo maxaa yeelay haddii ay iisoo bandhigaan Terminal cusub oo dushiisa aan ku bixiyo oo aan ku sii joogo, ka dib maxaa ganacsi ii ah, iyaga ayaguna meheraddu way wareegsan tahay waxay iibiyaan terminal kale Qiimaha barnaamijka dhibcaha, waxaan bixiyaa terminal kale iyo HTC Desire HD oo xaalad liidata ku jira waxaan u haystaa sidii warqad miisaan leh. Dooni maayo dalabyo, kaliya waxaan rabaa inay isiiyaan terminal xaaladdiisu wanaagsan tahay iyo inaanan ahayn inaan la joogo terminaal hore.
Cafis loo fidiyo laakiin waa inaan meel dhigaa.
Mobiilku si fiican buu u shaqeeyaa, mobilka waxaan hayaa muddo bil ah, waxaan dhigay dhowr filim si aan u arko inta uu batterigu sii soconayo waxaan dhihi doonaa in ka badan 5 saacadood oo daawashada filimada oo isku xigta, iyo adeegsiga barnaamijyada iyo internetka… Tan waxaan uga jeedaa, taleefan kasta oo casriga ah laga bilaabo maanta waa in lagu soo oogaa maalin kasta maaddaama codsiyada ay aad u isticmaalaan wax badan. Kaamiradaydu si sax ah ayey iigu shaqeysaa, dareenka taabashada lama taabankaro, marka la soo gaabiyo waxaan siiyaa 9,9 10kiiba XNUMX
Luis Eduardo Castilla Hernande dijo
maxaa yeelay taleefankayga gacanta ayaa dansan oo keliya marka bateriga la soo shubo
Jawaab Luis Eduardo Castilla Hernande
PapayaMobile waxay bilaabeysaa Game Engine SDK si ay ugu abuurto ciyaaro Android barnaamijkeeda